PHOTORECOVERY® सफ्टवेयर लागि पुन: सदस्यता [पीसी] | डाटा रिकभरी
PHOTORECOVERY® सफ्टवेयर लागि पुन: सदस्यता [पीसी]
Home → PHOTORECOVERY® सफ्टवेयर लागि पुन: सदस्यता [पीसी]
PHOTORECOVERY® प्रो विशेष प्रस्ताव!
लाइसेन्स नविकरण र अपग्रेड
PHOTORECOVERY® प्रो PHOTORECOVERY को ठूलो सबै सुविधाहरू छ®, तर यो पनि प्रदर्शन परीक्षण र मिडिया बहाली लागि डिजिटल मिडिया डाक्टर समावेश. तपाईं चाँडै जगेडा गर्न सक्छन्, पुछ्नु, ढाँचा, र एक ती प्रयोग डिजिटल मेमोरी कार्ड पुनर्स्थापना “नयाँ जस्तै” प्रदर्शन को स्तर. आफ्नो मेमोरी कार्ड प्रतिस्थापन गर्न जब तपाईं थाहा हुनेछ – ढिलो अघि थाहा!
तपाईं PHOTORECOVERY प्रो आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ® को खुद्रा मूल्य आधा मा! लागि नविकरण गर्न माथिको किन्नुहोस बटन क्लिक गर्नुहोस् $30!
PHOTORECOVERY® विशेष प्रस्ताव!
PHOTORECOVERY आफ्नो एक वर्ष सदस्यता नविकरण गर्न किन्नुहोस बटन क्लिक गर्नुहोस्® लागि $20!
नविकरण गर्न, तपाईं नवीकरण खरिद पूरा गरेपछि डाउनलोड र सफ्टवेयर को नयाँ संस्करण स्थापना गर्न आवश्यक हुनेछ. त्यसपछि, नयाँ संस्करण स्थापना पुरानो संस्करण प्रतिस्थापन र तपाईं आफ्नो रसिद देखि नयाँ सिरियल नम्बर प्रयोग गरेर सक्रिय गर्न अनुमति दिन्छ.